गगन थापाले राधिकालाई दिए कडा जवाफ - KTMreports.com
KTMreports ११ चैत्र २०७४, आईतवार १७:५१ 428 पटक हेरिएको
पुर्ब स्वास्थ्य मन्त्री तथा युवा नेता गगन थापाले सभामुख राधिका तामाङले गाईको मासु खान पाउने कुरालाई वकालात गरेपछी यसमा असन्तुष्टि जनाउदैनं आफ्नो फेसबुक मार्फत कडा अभिव्यक्ति दिएका छन ।
हेर्नुस जस्ताको तस्तै…
गाई काट्ने प्रस्ताब् पारित भएको दिन नेपालमा साम्प्रदायिक युद्दको शुरूवात हुने निस्चित !
तल्लो स्तरको सोच भएकाहरुलाई राष्ट्र चलाउनको लागि चुनेर पठाउनु नै हाम्रो गल्ती हो !
जबसम्म जात, जाती, सम्प्रदाय भन्दा माथी उठेर नेतृत्वले सोच्न सक्दैन तबसम्म राष्ट्र समृद्दी तर्फ उन्मुख हुदैन !
नम्वर ३ को उपसभामुख राधिका तामाग़ँ को पछिल्लो अभिव्यक्ती बाटै पुष्टि हुन्छ यिनिहरुको सोच कुन हदसम्म तल छ भन्ने ! गाईलाई यो देशको सम्विधानले राष्ट्रिय जनावर भनेर घोषित गरेको छ ।
हैन सक्दैन भने हात उठाओस् कहा कसलाई के गर्नुपर्दछ त्यो गर्न सक्ने क्षमता हामी सग नि छ ! यी हात ताली बजाउन र भात खान मात्र दिएका हैनन् हामीलाई ! आफ्नो माटो, आफ्नो स्वाभिमान, आफ्नो राष्ट्र र आफ्नो राष्ट्रियताको रक्षा गर्न हामीले मज्जैले जानेको छ ! यति मात्र नभएर यिनलाई जनताले चुनेर पठाएको राष्ट्र विकासको रेखा खिच्नलाई हो कि वाईहात कुरा गरेर साम्प्रदायिकताल
गाई भड्काउनलाई हो? गाईलाई काट्नु पर्दछ भन्ने १०% होलान् तर गाईको रक्षा गर्नु पर्दछ भन्ने ९०% छन् !
सेन्टिमेन्टमा बगेर सरकारले भोट बैङ्कको लागि यदि कुखुरा काटे झै गरेर गाईलाई चोक चोकमा काट्ने अनुमती दिईनै हाल्यो भनेपनि त्यसले समाजमा कति भयावह परिस्थिती निम्त्याउन सक्छ यसको विषयमा कसैले सोचेको छ कि छैन? १० भोटको लागि ९० भोट को अपमान गर अनि हेर कसलाई कहा पुर्याउनु पर्दछ त्यसको निष्कर्ष जनता आफैले निकाल्नेछन !